Banyere Anyị - Dongguan Chun Yip Electronic Technology Co., Ltd.
All nke anyị na e nyere na ISO9001-2015 quality usoro asambodo nke bụ a ihu ọma anyị n'elu ọnọdụ a na-uzuzu uzuzu na China.
Ihe anyị na-eme .:
Anyị tumadi na-emepụta dị iche iche na akpụkpọ ahụ switches gụnyere nke:
Ewepụghị Ịdị akọ switches
Hot-Ịga mmetụta Gbanye (PITA eme)
Metal Shrapnel Gbanye (snap dome)
LGP (Light Guide efere) switches
FPC (Mgbanwe E Bipụtara Circuit)
Switches PCB (E Bipụtara Circuit Board) switches
Ịgbanwee na ikanam Light (Light-emitting Diode)
Chun Yip ebe ya inception, e na-elekwasị anya ihe, ngwaahịa mma, keystroke ndụ na nnyefe oge. Na 2016, anyị ụlọ ọrụ e nyere na akwụkwọ "China Aaa Class Ebe E Si Nweta Enterprise" na "Contrace mbụ, Ebe E Si Nweta First Model Enterprise". Atmeanwhile anyị nwere enlarge anyị ngwaahịa, ya bụ Multimeter Test Line, nke bụ mgbagwoju, anyị na-eme dị iche iche di iche iche multimeter ule e.
Anyị entrepreneurial: Scientific, siri, Ihe, Innovation.
Okwukwe anyị: Ahịa mbụ, Quality mbụ, Mepụta uru.
1. 19 afọ 'na-amị akụkọ ihe mere eme na 5 afọ' ebupụ ahụmahụ.
2: Anụ na ahụmahụ na-arụ ọrụ otu: karịa 80% nke mkpara na-arụ ọrụ na anyị factory n'ihi na ihe karịrị 6 afọ.
3: Professional engineering otu ga-enye oru nkwado mmepe nzọụkwụ nke ọhụrụ oru ngo.
4. Nye onye-nkwụsị mmepụta na nzukọ ọrụ site omenala akpụkpọ ahụ mgba ọkụ na PCBA, Herọd, azụ efere wdg
5. Iji ụkpụrụ dị elu ebu ka obi sie ndị na ngwaahịa na elu àgwà ma kpọmkwem akụkụ.
6.-ụlọ 100% functionally anwale.
Ị ga-enwe afọ ojuju na anyị elu-edu ngwaahịa na ezi uche price na-adọ nnyefe na zuru okè mgbe-sales ọrụ.
Test eduba ná Pin N'ihi Digital Multimeter, Banana Test ebute N'ihi Multimeter, Fpc OEM akpụkpọ ahụ Gbanye, Digital Multimeter Test ebute nyocha, Multimeter Test Duru Pen USB , Multimeter nyocha Test Lead ,